CeleLove - Page2of6- News and Media
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်း ထပ်ကြားရ ပြန်ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်း ထပ်ကြားရ ပြန်ပါပြီ အ ခု သတင်းဟာ် DVB သ တင်း မှာ ပြော သွား တာပါ။ အမေရိကန် ဆေးသိပ္ပံ ပညာရှင်တွေဟာ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကနေ အခက်ဆုံးအဖြေကို ရှာတွေ့သွားကြပါပြီတဲ့ Covid19 Virusကူး စက် ခံ ရ […]
အချစ်ရေး ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို ချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ…
အချစ်ရေး ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို ချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ… ချစ်သူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရင်၊ အရာအားလုံးကို ဂရုစိုက်ရင်၊ မျက်နှာတစ်ချက်အညိုမခံဘဲ လိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးကိုရထားတဲ့မိန်းကလေးကို အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို လူမျိုးကိုရထားတာကို ခေါ်တာပါနော် … (၁) ကိုယ့်အပေါ် ပွင့်လင်းတဲ့သူ အချစ်ရေးမှာ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေမရှိဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့သူမျိုးပါ။ […]
မင်းရာဇာအမှုကို နေပြည်တော် တရားရုံးမှာ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိုစစ်တဲ့ ရဲချူပ်​မှတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်မည်
မင်းရာဇာအမှုကို နေပြည်တော် တရားရုံးမှာ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိုစစ်တဲ့ ရဲချူပ်​မှတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်မည် မင်းရာဇာအမှုကို နေပြည်တော်ရဲချုပ်မှ တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်မည် …။ မင်းရာဇာရဲ့ ယောက္ခထီးဖြစ်သူ အငြိမ်းစားရဲမှုးကြီး ဦးမောင်မောင်အေးရဲ့ အသနားခံတောင်းဆိုမှုကြောင့် မင်းရာဇာအမှုကို နေပြည်တော်မြို့ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးမှာ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိုစစ်တဲ့ ရဲချုပ်ကြီးတွေနဲ့ တရားသူကြီးတွေကိုယ်တိုင် တရားစီရင်မယ်လို……ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသစ် ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီး စိုးထွဋ်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ ထုတ်ပြန်​ပြောကြားလိုက်ပါတယ် […]
ယောက်ျားလေးတွေကို အသည်းယားစေတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အပြုအမူများ…
ယောက်ျားလေးတွေကို အသည်းယားစေတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အပြုအမူများ… – နှုတ်ခမ်းဖွဖွ ကိုက်ခြင်း စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ သို့ ရှက်တဲ့အခါ ကလေးလို နှုတ်ခမ်းဖွဖွကိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ကျားလေးတွေက စွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ် …။ – နူးညံ့တဲ့အသားအရည် နူးညံ့တဲ့အသားအရည်ရှိတဲ့ မိန်းမတွေလောက် ဆက်ဆီကျတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ရောမနဲ့ အီဂျစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ […]
မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက် စင်ကာပူမှာ ကိုဗစ်-၁၉ Positiveနဲ့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ Zin Min Ko Ko ရေးတဲ့စာ
မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက် စင်ကာပူမှာ ကိုဗစ်-၁၉ Positiveနဲ့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ Zin Min Ko Ko ရေးတဲ့စာ မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက် စင်ကာပူမှာ covid 19positive နဲ့ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ Zin Min Ko Ko ရေးတဲ့စာလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် …။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ […]
ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စအားလုံးရှင်းမှပဲ ဂျူတီလဲပေးပါ ကူးချင်းကူး ကျနော်ပဲအကူးခံလိုက်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ရဲရဲတောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး
ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စအားလုံးရှင်းမှပဲ ဂျူတီလဲပေးပါ ကူးချင်းကူး ကျနော်ပဲအကူးခံလိုက်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ရဲရဲတောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး ဘီးလင်းမြို့က လေးစားစရာ ဆရာတစ်ဦး(သို့)တိုက်စစ်မှုး တာဝန်ကျတဲ့ ရက်ပြည့်တော့ ဂျူတီချိန်းမယ့် ဆရာဝန်ကလာတယ်။ အဲ့လိုလာတာကို ဆရာနေမျိုးလင်းက နေပါစေဆရာ …ဒီဗိုင်းရပ်ကိစ္စ အားလုံးရှင်းမှ ဆရာဂျူတီဝင်ပေးပါ …။ ကျွန်တော်ပဲ အခုဆက်ဝင်မယ်နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သံသယလူနာထဲက […]
ကိုဗစ် ကာကွယ်နည်းလျှို့ဝှက်ချက် တရုတ်က ဖော်ပြောလိုက်ပြီ
ကိုဗစ် ကာကွယ်နည်းလျှို့ဝှက်ချက် တရုတ်က ဖော်ပြောလိုက်ပြီ Doctors in China confirm. (မွနျမာစာမမှနျပါက အောကျတှငျ ဆှဲဖတျပါ) This information is 100% accurate very effective for everyone. 這 是 100 ％ 準確 […]
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးသောမိန်းမ (သို့) မင်းရာဇာမိန်းမကဲ့သို့မိန်းမ
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးသောမိန်းမ (သို့) မင်းရာဇာမိန်းမကဲ့သို့မိန်းမ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ အိမ်မှာလာနေတဲ့ မိန်းမဘက်ကအမျိုးနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ် …။ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ အပြင်မှာဖောက်ပြန်တက်ကြတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မကြာခဏကြားနေကြရတဲ့ […]